स्वास्थ्य पत्रकारलाई सामग्री सहयोग : RajdhaniDaily.com
Homeप्रदेशप्रदेश ३स्वास्थ्य पत्रकारलाई सामग्री सहयोग
काठमाडौं । एसोसिएसन अफ इन्टर नेसनल एनजीओज इन नेपाल (एआईएन)ले स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाललाई कोभिड किट सहयोग गरेको छ । कोभिडविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य पत्रकारको सुरक्षाका लागि एआईएनले साढे ३ लाखभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको हो ।
राजधानीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा एआईएन अध्यक्ष डा. सुशील कोइरालाले मञ्च अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेलाई सामग्री हस्तान्तरण गरे । सोही अवसरमा एआईएन अध्यक्ष डा. कोइरालाले कोभिड महामारी सुरु भएयता अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य पत्रकारको सुरक्षाका लागि एआईएनमा आवद्ध विभिन्न संस्थाले कोभिड किटका रूपमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
आगामी दिन मञ्चसँग स्वास्थ्य विषयमा सहकार्य गरी अघि बढ्ने जानकारी पनि उनले दिए । मञ्च अध्यक्ष न्यौपानेले कोभिड महामारीका बेला संक्रमण जोखिम नभनी दिनरात फिल्डमा खटिने स्वास्थ्य पत्रकारको चिन्ता लिँदै सामग्री सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिए ।
एआईएनले उपलव्ध गराएको कोभिड किटमा सर्जिकल तथा एन– ९५ मास्क, डिजिटल थर्मोमिटर, अक्सिमिटर, ह्याण्ड स्यानिटाइजर, फेससिल्ड, साबुनलगायत सामग्री छन् । यी स्वास्थ्य सामग्री फिल्डमा खटिएका सबै स्वास्थ्य पत्रकारलाई वितरण गरिने जनाएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बाधक बनेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका...
बैतडीमा गुडिरहेको बसमा ढुंगा खस्दा एक यात्रुको मृत्यु, तीन घाइते
बैतडी । बैतडीमा गुडिरहेको बसमा ढुंगा खस्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ । पाटन नगरपालिका-८ झौलेकमा गुडिरहेको सुप.प्र.२००१ ख ११५६ बसमा मंगलबार बिहान सडकमाथिबाट ढुंगा खसेको...
इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन लिइने भाषा परीक्षा आज
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक बनेको इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियाअन्तर्गत लिइने भाषा परीक्षा आज (सोमबार) हुने भएको छ ।...
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रालयमा बाँडफाँटको तयारी तीव्र पारेका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा मिलेमा आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिएको छ । आजै...
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरे । तर, पछिल्ला केही दिनको तुलनामा प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको दृश्यमा...
३,९१५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २७ जनाकाे मृत्यु
काठमाडौं उपत्यकामा थप ६१८ जनामा कोरोना संक्रमण
प्रदेश २ को सबै सीमा नाका बन्द
बिहे भोजपछि फैलिएको कोरोना : दुईको मृत्यु, ९१ मध्ये ७४ संक्रमित
एमाले विवादः १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ओलीको आनाकानी
सुभाष साह - September 13, 2021
मधुजंग पाण्डे - September 13, 2021
सविन शर्मा - September 13, 2021
भविन कार्की - September 12, 2021